बिरामी छन् भगवान, भक्तले कसको गुहार मागुन् ? | PaniPhoto
बिरामी छन् भगवान, भक्तले कसको गुहार मागुन् ?	पानीफोटो / April 7, 2011 /2Comments तिमी मान या नमान,
भगवानको पनि आयु हुन्छ
तिमी जसरी नै जन्मन्छ अनि,
भयानक मृत्यु मर्दछ ……..।
मान्छे इश्वरको चिहान माथि टेकेर भाषण दिन्छ
इश्वर अमर छ,
इश्वर यत्र, तत्र, सर्वत्र छ …….।।
(गणेश कार्कीको मृत इश्वर कविताबाट)
इश्वर छन् कि छैनन् यो सायद कहिलै नसकिने विवादको बिषय हो । जसले इश्वर मान्दैन, उ, माथीको कविताको हदसम्म पुगेर कराउँछ । तर जो इश्वरको अस्तित्वलाई सकार्छ उसका लागि इश्वर सबै कुरा हो । साना भन्दा साना कुरा देखि जीवनका ठुला ठुला मुद्दामा पनि इश्वरलाई गुहार्नु आस्तिकहरुको नियती हो । उनीहरु भजन र इश्वरको शक्तिमा कहिले पनि प्रश्न उठाउँन चाहादैनन् । आफु बिरामी भएको समयमा होस् या अरु कुनै समयमा इश्वरलाई गुहार मागिरहनु उनीहरुका लागि अस्वाभाविक हुदैन । यसरी हरेक कुरामा इश्वरलाई गुहार्ने भक्तका इश्वर नै बिरामी भए भने नी ? एक पटक कल्पना गर्नुहोस् त ।
सन्दर्भ साईबाबा बिरामी भएको बिषयको हो । अहिले विश्वका करिब ३ करोड मानिसका भगवानका रुपमा पुजित् साइबाबा बिरामी अवश्थामा अस्पतालमा छटपटाई रहेका छन् । र, उनका लागि प्राथना गर्दै अस्पतालका अगाडी भेला हुने भक्तजनहरुको भीड बढ्दो छ । सबैका मनमा प्रश्न जाग्छ, भगवान बिरामी भइरहेका बेला उनका भक्तहरुले कसलाई पुकार्दै होलान् ?
साइबाबा भौतिक रुपमा भारतको एउटा सानो क्षेत्रमा समेटिएर बसेका छन् । उनका सम्पुर्ण कृपा दृष्टि त्यही ठाउँमा मात्र कैद भएको छ । हो, उनले त्यो ठाउँमा जति योगदान गरेका छन् यदि उनी नहुने भने त्यो ठाउँ आजको स्थिती सम्म अहिले नै पुग्दैन थियो । यसमा कुनै दुइमत छैन । तर यसले नै अर्को प्रश्न जन्माउँछ के भगवान संसार भरिको धन एक ठाउँमा बटुलेर त्यही मात्र खन्याउँछन् ? भगवानका लागि त संसार नै घर होइन र ? खोई अरु कहाँ पुगेको छ साइबाबाको कृपा दृष्टि ? संसारमा त्यही ठाउँ मात्र हो त विकाशको अभाव भएको ? कि भगवानले पनि आफ्ना र पराई छुट्याउँछन् ?
साइबाबा त्यसै आजको स्थानमा आएका होइनन् । उनले यो स्थानसम्म पुग्न हरेक जादुगरी प्रयत्न र कोशिश गरेका थिए । मुखबाट शिवलिङ्ग निकाल्दै, हातबाट खरानी झार्दै, अनि यस्तै बिभिन्न जादुगरीबाट उनले धेरैलाई प्रभाव पारेका थिए र छन् । उनलाई भगवान मान्नेहरु उनको कृपाबाट प्राप्त बिगुत (खरानी) को टिका लगाईदिए शरिरका रोगहरु हराउँने र बिरामी स्वास्थ्य हुने विश्वास गर्छन् । यदि उनी त्यस्तै शक्तिशाली थिए भने उनले यी शारिरिक कष्ट किन भोग्नु पथ्र्यो होला ? थोरै बिगुत खान्थे अनि अलिकति बिगुत निधारमा दल्थे, उनको सबै रोग यसरी नै बिसेक हुनु पर्ने होइन र ? यदि मृत्युलाई उनले वरण गर्न खोजेका हुन् भने उनले जानाजान सहज मृत्युवरण गर्दैनन् थिए होलान् ? फेरि भगवानका लागि मृत्यु र जीवनमा कति नै फरक होला र उनका भक्तहरुले यति विघ्न आत्तिनु पर्ने ? तर परिस्थितीले उनको हार देखाएको छ । उनी अध्यात्म र अलौकिक कुरा छोडेर भौतिकवादी सरह अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
अन्त्यमा, साइबाबा एक चामत्कारी र प्रभावशाली व्याक्ती हुन् यो सत्य हो । उनमा एकसाथ अनेक मानिसमा प्रभाव पार्न सक्ने कला र विशेषता कायम थियो । यसमा विरलैको बिरोध हुनुपर्दछ । तर उनलाई भगवान बनाएर सम्पुर्ण ज्ञानलाई उनमै हराएर अन्धविश्वासी बन्ने कुराको मात्र बिरोध हो यो । उनलाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् र, उनको यो बिग्रीएको स्वास्थ्यको सुधार सँगै सबैको अन्ध विश्वास हट्न सकोस् ।
Posted in: नोट अफ डिसेन्ट, समाचार/विश्लेषण
विकाश says: April 8, 2011 at 8:24 am / Reply
खोइ के को हावा लागेर जादुगरलाई भगवान मान्दै हिडेका हुन् । साइबाबा एक जादुगर हुन् । र, उनका हजारौ राम्रा कुराहरु छन् तर पनि उनी भगवान होइनन् ।
Freedom Raj Pandey (Kalayaan) says: April 9, 2011 at 1:18 pm / Reply
kahi god pani sick hunchan ta ..yo ta aachamma..